အင်္ဂလိပ်စာလုံးများကို word stress (ဖိ၍ရွတ်သံ) မှန်ချင်တဲ့အခါ (1) ~ ကျိုက္ခမီသားလင်းနိုင်ဦး
အင်္ဂလိပ်စာလုံးများကို word stress (ဖိ၍ရွတ်သံ) မှန်ချင်တဲ့အခါ (1)
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိုင်ဦး Tuesday, March 22, 2016 SayarWinNaingOo No comments
အင်္ဂလိပ် စကားပြောသင်ခန်းစာတွေကို တင်ပေးနေတော့ အသံထွက်ပုံ ရွတ်ဆိုပုံလေးတွေကိုလည်း ဗဟုသုတအဖြစ် တင်ပေးသင့်တယ် ထင်တဲ့အတွက် ရေးသားလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ sentence stress တွေကျတော့ dictionary မှာလည်း ကြည့်လို့မရတဲ့အပြင် လွယ်လွယ်ကူကူ မတွေ့နိုင်တဲ့တွက် ပြုစုပေးလိုက်ခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။
အင်္ဂလိပ်စကားဟာ ညီညာတဲ့ရေလှိုင်းလေးတွေလို မြင့်လိုက် နိမ့်လိုက် ၊ တက်လိုက်ကျလိုက်နဲ့ ကာရံညီစွာ ပြောရတယ်လို့ ဆိုပါတယ် .. ။ အဲလိုဆိုတော့ စကားလုံးရဲ့ အသံထွက်(pronunciation) အပြင် ဖိပြီး ရွတ်ရမယ့်နေရာ ဖော့ပြီးရွတ်ရမယ့်နေရာ ..ဖိပြီးရွတ်ဆိုရမယ့်စကားလုံး ဖော့ပြီးရွတ်ဆိုရမယ့် စကားလုံး စသည်ဖြင့် သိဖို့လိုအပ်လာပါတယ် ။ စကားလုံးတစ်လုံးမှာ stress ပြောင်းသွားတာနဲ့ သူ့ရဲ့ရုပ် (word form) ပြောင်းသွားတာရှိသလို ၊ ၀ါကျမှာဆိုလျှင်လည်း stress ပြောင်းသွားတာနဲ့ မူရင်းအဓိပ္ပါယ်နဲ့အတူ ပူးတွဲထည့်ပေးလိုက်တဲ့ ဆိုလိုရင်းရသ(sense) ပါ ပြောင်းသွားတတ်ပါတယ် ။
ဥပမာ >> record = (n) မှတ်တမ်း (v) မှတ်တမ်းတင်သည် .. ဆိုပြီးရှိရာမှာ အသံထွက် နှစ်ခုက မတူပါဘူး
noun ကို RECord (“ရက်”ကော့ဒ်) လို့ထွက်ရမှာဖြစ်ပြီး verb ကို reCORD (ရီ“ကော့ဒ်” )လို့ ထွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ။ dictionary မှာကြည့်လို့ရတတ်ပါတယ် ။ သို့သော် ကြည့်လို့မရတော့တဲ့ sentence stress အထိ ကျနော်က ဆက်ရေးသွားမှာပါ ။ အရေးကြီးပါတယ်လို့ မပြောလိုသော်လည်း သိထားဖို့တော့ ကောင်းတယ်လို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ် ။
stress ကို ရွတ်ဆိုတဲ့အခါ အသံကို မြှင့်ပြီး.. ပိုကျယ်ပြီး ရွတ်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ် ။ သရသံကို ကြာကြာရွတ်ဆိုရမှာဖြစ်ပြီး .. ၀ါကျမှာဆိုလျှင်တော့ ဖိပြီးရွတ်ရမယ့် စာလုံးမတိုင်ခင်မှာ ခဏရပ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြင့် stress word ဟာ ပိုပြီး ပေါ်လွင်သိသာစေပါတယ် .. Oxford Practical English usage မှာ ဒီလိုရေးထားပါတယ် ..
In speech, we can give words extra stress - make them sound ‘stronger’ by pronouncing them louder and withahigher intonation . We may also make the vowel longer, and pause beforeastressed word.
(1) Word stress - general rules
စကားလုံးများကို ဖိပြီးရွတ်ဆိုတဲ့အခါ ယေဘူယျစည်းမျဉ်းလေးတွေပါ
(1.1) There is only one stress in one word.
စကားလုံးတစ်လုံးမှာ ဖိရွတ်သံ တစ်ခုပဲ ရှိပါတယ်
(1.2) Only vowels are stressed, not consonants.
သရသံများကိုသာ ဖိရွတ်ပါတယ် ၊ ဗျည်းသံများကို ဖိမရွတ်ပါ ။
(2) Word stress - specific rules (there are many exceptions to these rules)
အသေးစိတ် စည်းမျဉ်းတွေရှိပါတယ် ၊ ယေဘူယျစည်းမျဉ်းတွေဖြစ်လို့ ခြွင်းချက်တွေလည်း ရှိပါတယ်
(2.1) Stress on the first syllable
မထမအသံပေါ်မှာ ဖိပြီးရွတ်ဆိုရမယ့်စကားလုံး များကတော့
(2.1.1) most 2-syllable nouns – china, table, export, pencil
အသံနှစ်သံရှိတဲ့ noun အများစု
(ဥပမာ CHIna (“ချိုင်း..”နာ) လို့ ရွတ်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ် chiNA (ချိုင်“နား...”)လို့ ရွတ်ဆိုရမှာ မဟုတ်ပါဘူး)
(2.1.2) most 2-syllable adjectives – slender, clever, happy
အသံနှစ်သံရှိတဲ့ adjective အများစု
ဥပမာ ..HAPpy >> ဟက်..ပီ လို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ် ဟက်ပီးးးးးးး လို့ မဆိုသင့်ပါ
(2.2) Stress on the last syllable
နောက်ဆုံးအသံပေါ်မှာဖိပြီးရွတ်ရမယ့် စာလုံးတွေကတော့ ..
(2.2.1) most 2-syllable verbs – to export, to decide, to begin
( to ပါနေတာက verb မှန်းသိအောင် အပိုထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ် ၊ noun မှာ EXport လို့ထွက်ပေမယ့် verb ဖြစ်သွားတဲ့အခါ exPORT လို့ ဖြစ်သွားပါတယ် )
(2.3) Stress on the second syllable from the end (penultimate syllable)
(2.3.1) words ending in “ic” – graphic, geographic, geologic, photographic
“ic” နဲ့ဆုံးတဲ့ စကားလုံးများ
ဥပမာ geoGRAPhic, geoLOgic စသည်ဖြင့်
(2.3.2) words ending in “sion” and “tion” – television, revelation, information
“sion” ၊ “tion” တို့နဲ့ဆုံးတဲ့ စကားလုံးများ
teleVIsion, reveLAtion, inforMAtion.. စသည်ဖြင့်
(2.4) Stress on the third syllable from the end (ante-penultimate syllable)
နောက်ဆုံးအသံမှ စတင်ရေတွက်ပြီး တတိယမြောက်အသံတွင်ဖိရွတ်ရန် ..စကားလုံးများကတော့
(2.4.1) words ending in “cy”, “ty”, “phy” and “gy” – democracy, society, photography, geology “cy”, “ty”, “phy” နှင့် “gy” ဆုံးသော စကားလုံးများ
ဥပမာ deMOCracy, soCIety, phoTOGraphy, geOLogy ..စသည်ဖြင့် ဖြစ်ပါတယ်
မြန်မာလိုမှာက ဒီမိုကရေစီ..ဆို အသံ ၅ ခုလိုဖြစ်နေပေမယ့် အင်္ဂလိပ်မှာက ၄ ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ် ၊ dictionary မှာ ဒီလို အသံပိုင်း လေးတွေ ခွဲထားပါတယ်
de•moc•ra•cy, so•ci•e•ty, pho•tog•ra•phy, ge•ol•o•gy
ဒီမှာ ကျနော် ကြုံလို့တစ်ခု အပိုထည့်ပေးချင်တာက အသံထွက် မတူတာကြားလျှင် အသံထွက် အမျိုးမျိုးကို နားထောင်ကြည့်စေချင်ပါတယ် အနည်းဆုံးတော့ အင်္ဂလိပ်နဲ့ အမေရိကန် နှစ်မျိုးကို နားထောင်စေချင်ပါတယ်
democracy (ဒီမိုခရေဆီ၊ ဒမော့ခရေဆီ)
status (စတေးတပ်(စ်) ။ စတာ့တပ်(စ်) )
data (ဒေတာ ၊ ဒါတာ) ..
စသည်ဖြင့် ရှိနေတော့ ကိုယ်သိတာက အမှန်လိုလို.. ပိုပြီးခေတ်မှီသလိုလို..native သံပေါက်တယ်လိုလို တွေ ထင်တတ်ကြပါတယ် (ကျနော့်ကိုယ်ကျနော်ညွှန်းတယ်လို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်)
(2.4.2) words ending in “al” – critical, geological
(2.5) Compound words (words with two parts)
စကားလုံးနှစ်ခုကို တစ်ခုအဖြစ်ပေါင်းထားတဲ့ စကားလုံးတွေအတွက် စည်းမျဉ်းတွေကတော့
(2.5.1) compound nouns, the stress is on the first part – blackbird, greenhouse, bluebird, blackboard, notebook, bookstore, toothbrush, keyboard
ပေါင်းစပ်နာမ် များကို ရှေ့ပိုင်းမှာ ဖိပြီးရွတ်ဆိုရပါမယ်
ဥပမာ BLACKbird, NOTEbook,....
(2.5.2) compound adjectives, the stress is on the second part – bad-tempered, old-fashioned
ပေါင်းစပ်နာမ၀ိသေသနများကို နောက်ပိုင်းမှာ ဖိပြီးရွတ်ဆိုရပါမယ်
ဥပမာ bad-TEMpered, old-FASHioned
(2.5.3) compound verbs, the stress is on the second part – to understand, to overflow
ပေါင်းစပ်ကြိယာများကို နောက်ပိုင်းမှာ ဖိပြီးရွတ်ဆိုရပါမယ်
ဥပမာ.. underSTAND, overFLOW
(2.5.4) two word compound nouns, the stress is on the first word - air conditioner, nail polish, french fry
စကားလုံးနှစ်လုံးကိုတွဲမထားပဲ ခွဲထားတဲ့ ပေါင်းစပ်နာမ်များကို ရှေ့ကစကားလုံးမှာ ဖိပြီး ရွတ်ဆိုရပါမယ်
ဥပမာ.. AIR conditioner, NAIL polish ... စသည်ဖြင့် ဖြစ်ပါတယ်
၀ါကျတွေကို ပြောတဲ့အခါ ပုံမှန်အားဖြင့် ဘယ်လို stress လုပ်မယ်ဆိုတာ ဆက်ရေးပါမယ် ။ အဲဒီထက်ပိုပြီးတော့ stress နေရာပြောင်းတဲ့အခါ အဓိပ္ပါယ်ပြောင်းသွားပုံကိုလည်း ရေးပါဦးမယ် ။
တော်တော်ကြီး သိပြီးလို့ ရေးတာမဟုတ်ပါ ။ လိုအပ်ချက်တွေ ရှိပါတယ် ။ သိသမျှကို ပေးချင်နေတာသာ ဖြစ်ပါကြောင်း
ဆရာဝင်းနိုင်ဦး Facebook အင်္ဂလိပ်စာစိတ်ဝင်စားသူများအဖွဲ့ Group မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။